NARGIS CYCLONE | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>3 years after Cyclone Nargis and "Poem+Music+Painting = Art NGO" from Burma May 5, 2011
Filed under: MY NEWS,NARGIS CYCLONE,PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:09 pm
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်ကူညီခဲ့ကြသည့် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာများ စုစည်းထားသည့် “ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ပန်းချီ လူမှုကူညီသူများ” အဖွဲ့သည် လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
>3 years after Cyclone Nargis and Sein Yaung So Activities’ Organization Setup & Member Form May 3, 2011
Filed under: MY NEWS,NARGIS CYCLONE,PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:18 pm
အရိပ်ရသစ်ပင်စိုက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း၊ လူမှုကူညီရေးတွေ လုပ်နေတဲ့ ပည်တွင်းဖြစ် စိမ်းရောင်စို Activities အဖွဲ့ကို ယခုအခါ မှတ်ပုံတင်ပြီး လှုပ်ရှားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။
အခမ်းအနားကို သစ်ပင်ချစ်သူများ၊ ကမ္ဘာမြေချစ်သူများ၊ လူမှုကူညီရေးသမားများ၊ အမရပူရ ကုသိုလ်ဖြစ်အခမဲ့ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှင်များအပြင် မန္တလေးမြို့ခံ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ဂျာနယ်လစ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေထဲကဆိုရင် ဆူးငှက်၊ ညီပုလေး၊ မောင်တင်သစ်၊ မော်မင်းသန်း၊ ဟန်(မန္တလေး) စသဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကဗျာဆရာတွေထဲကဆိုရင်တော့ ဇော်ထိန်(မန္တလေး)၊ မောင်နန်းဝေ၊ နေမော်ဟိန်း၊ စံညိမ်းဦး၊ အလတ်ကောင်၊ ဘိုသိန်း(မန္တလေး)၊ ဥက္ကာကျော်၊ အောင်ဘညို စသဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျာနယ်သမားတွေထဲကဆိုရင် နောင်(ရူပ)၊ မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်)၊ အောင်မှိုင်းဆန်း စသဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မန္တလေး ထွန်းဦးစာပေက ဦးထွန်းဦးလည်း တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
Cyclone Nargis,2Years After May 3, 2010
Filed under:ို,MY WRITING,NARGIS CYCLONE,PHOTOS — Nyo Gyi @ 11:15 am
ငိုနေတဲ့ မျက်လုံးများကို မှိတ်မရဘူး…။
မျောက်အုန်းသီးရသလို စီမံခန့်ခွဲမှုများရဲ့ အောက်မှာ…
ကယ်ဆယ်ရေးအချိန်မီ မစတင်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲများ….
၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇….မေ။
ထိခိုက်မှုများတဲ့ ရွာသားများကို ကယ်ဆယ်ကျွေးမွေးခဲ့ကြ…
ဖောက်ပြား၊ ဟောက်စားတဲ့ မသူတော်တွေ…။
စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးပါစေ…။ ။
“ရဟန်းသံဃာများ၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ စေတနာ” နှင့် “စစ်အဆိုးရ၏ အ၀ိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဝေဒနာ”
MAN OF THE BLOG (For Saving Cyclone Nargis Victims of Burma) May 6, 2009
Filed under: NARGIS CYCLONE,PHOTOS,SITAGU SAYADAW — Nyo Gyi @ 5:02 pm
နာဂစ် (၁) နှစ်ပြည့်
I choose “Sitagu Contribution For Nargis Victims”, leaded by Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara, as “MAN OF THE BLOG” for their activities of saving Cyclone Nargis Victims of Burma (Myanmar).
စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်မှ လှမ်းမြင်တွေ့ရတဲ့ Sitagu International Buddhist Academy နှင့် သီတဂူအာယုဒါန ဆေးရုံတော်
Here is Sitagu Official Website Link;
“နာဂစ် (၁) နှစ်ပြည့် နှင့် MAN OF THE BLOG”
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ(၂)ရက်-(၃)ရက်တွင် ဗမာပြည် (မြန်မာပြည်) ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း အစရှိသည့် အောက်ပိုင်းဒေသများကို ၀င်ရောက်မွှေနှောက်ဖျက်ဆီးချေမှုန်းသွားခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အိုးမဲ့၊ အိမ်မဲ့၊ ကျောင်းမဲ့၊ မိသားစုမဲ့၊ စီးပွားပျက်၊ ဥစ္စာပျက် ဖြစ်ခဲ့ရရှာသော ဗမာ့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူပြည်သားများကို စွမ်းစွမ်းတမံ စေတနာပါပါ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ အနန္တဖြင့် ကယ်တင်ကုသထူထောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အစောဆုံး၊ အမြန်ဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်ကူညီပေးခဲ့၊ ပေးဆဲဖြစ်သည့် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥာဏိဿရဦးဆောင်သော
သီတဂူအဖွဲ့ ၏ နာဂစ်အလှူတော် (Sitagu Contribution For Nargis Victims) ကို ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်၏ အဓိကဂုဏ်ပြုဖွယ်ရာ (MAN OF THE BLOG) အဖြစ် နာဂစ်မုန်တိုင်း တစ်နှစ်ပြည့် (ယခု ၂၀၀၉၊ မေ လ)တွင် ရွေးချယ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Sitagu Sayadaw’s photo from http://www.sitagu.org/about/
>MAN OF THE BLOG (For Saving Cyclone Nargis Victims of Burma)
Ayarwaddy Sitagu Contribution Diary (09-06-2008 to 09-12-2008) April 3, 2009
Filed under: MY NEWS,NARGIS CYCLONE,PHOTOS,SITAGU SAYADAW — Nyo Gyi @ 8:12 am
>Ayarwaddy Sitagu Contribution Diary (09-06-2008 to 09-12-2008)
TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (2) February 5, 2009
Filed under: MY NEWS,NARGIS CYCLONE,PHOTOS — Nyo Gyi @ 4:21 pm
>TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (2)